Sideed uga saari kartaa kuwa raacsan barta Instagram | Androidsis
Waxaa macquul ah inay jiri doonto qof kugu raacaya barta Instagram laakiin ma doonaysid in qofkani awood u yeesho inuu ku raaco. Waxaa jiri kara sababo badan oo u sabab ah, si fudud oo aadan u jeclayn, ama waa bot ka mid ah shabakadda bulshada. Nasiib wanaagse, shabakadda bulshada ayaa soo bandhigtay hawl lagu tirtirayo kuwa raacsan, oo aan adeegsan karno haddii aan ku leenahay koonto guud ama mid gaar loo leeyahay.
Waa wax run ahaantii fududahay in la gaaro, markaa hoosta waxaan ku tusaynaa talaabooyinka ay tahay inaan raacno awood u yeelan karto inaad ka saarto kuwa raacsan barta Instagram. Marka, xisaabaadkaas aan adiga ku xiiseyneynin ama aadan rabin inaad raacdo, ma sameyn doonaan sidaas.
Waa shaqo aan ku jirin arjiga caanka ah muddo aad u dheer, laakiin aan ka faa'iideysan karno mar walba. Intaa waxaa sii dheer, waxay u adeegtaa xisaabaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha. Waayo, waa inaan marka hore galno astaanteenna shabakadda bulshada ka dibna riix tirada kuwa raacsan ee aan ku dhex leenahay.
Waxaan markaa ka heli doonnaa liiska dadka na soo raaca ee ku jira. Waa inaan helnaa qofka aan dooneynin inuu naga raaco liiskaas. Haddii aad rabto waxaad isticmaali kartaa mashiinka raadinta si aad ula xiriirto qofkan si toos ah. Sikastaba xaalku ha ahaadee, markaan helnay, waa inaan gujino saddexda qodob ee toosan ee ka muuqda magaca agtiisa.
Markaad sidan sameyso, waan sameyn doonnaa ka bax ikhtiyaarka si aad uga saarto raacyahan boggayaga. Waxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan siino si aan u tirtirno, qofkani wuxuu joojinayaa inuu na soo raaco. Marka haddii aan hayno astaan ​​gaar ah oo ku saabsan arjiga, ma awoodi doontid inaad ku aragto daabacadahayada ku dhex jira.
Sida aad u jeeddo, tillaabooyinka la raacayo kiiskan runtii way fududahay. Waxay kuu noqon doontaa mid kugu habboon inaad awood u yeelato inaad ka takhalusto raaciye shabakadda bulshada ee caanka ah. Markaa haddii uu jiro mid ku dhibaya, waxaad aadi kartaa qaabkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo tirtiro kuwa raacsan koontadaada 'Instagram'